Global Voices teny Malagasy » Ahiana horavana noho ny tetikasam-panarenana ny tanànan’ny mpanjono sy ny ala honko iray ao Filipina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Jona 2018 16:56 GMT 1	 · Mpanoratra Kodao Productions Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Fokonolona Taliptip ao Filipina. Saripika avy amin'ny Kalikasan PNE, nahazoana alalana
Ny lahatsoratra  dia avy amin'i Leon Dulce ao amin'ny Kodao, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Filipina, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Efa mikorataba amin'ny enina maraina ny seranan'ny mpanjono ao Obando, miorina ao avaratry ny tanànan'i Manila renivohitr'i Filipina. Efa mifamorivory ireo lakana lakam-panjonoana misosa sy mikisaka am-pitandremana miandry ny anjarany hiantsona.
Mihatony tsimoramora lasa toy ny eny an-dobo ilay nanonjanonja be teny ambony sambokely mizotra mankany amin'ny tanàna amoron-dranomasina Taliptip any Bulakan, faritanin'i Bulacan. Fonenan'ny mpanjono sy mpanao sira miisa 5000 maka ny fanambinany avy amin'ny trondro, ny mola, ny foza, ny makamba, ny patsa avy amin'ny ranomamy sy ny alan-konko ny ranomasina manodidina.
Ao amin'ireo tambatambatra fokonolon'ny nosy kely ireo, mizotra amin'ny fomba mahery vaika ny tetikasam-panarenana amin'ny faritra mirefy 2500 hekitara ataon'ny San Miguel Corporation, mandrahona ny hanova ny zava-drehetra ho lasa ilay lazaina ho ‘complexe aerotropolis’ ahitana seranam-piaramanidina, lalambe fizorana haingana ary fiitaran'ny tanàndehibe.
Notazonina mafy ho tsiambaratelo tsy ho fantatry ny mponin'i Taliptip ny tetikasa mandra-panangan'ny mpanandrateny ara-tontolo iainana sy ny mpiasan'ny fiangonana ny raharaha teo amin'ny fokonolona, ary mandra-pahita ny filoha Rodrigo Duterte tao amin'ny vaovao nanao pi-maso ny fifanarahana momba ilay tetikasa.
Miahiahy ny mponina, indrindra fa ny fianakaviana izay efa niaina tamin'ny tanànakely nihoatra ny 80 taona izao, fa mety ho potik'ity tetikasa ity ny fiainana sy ny fari-piainan-dry zareo.
Mpanjono iray maka ny haratony ao Taliptip. Saripikan'i Leon Dulce/Kalikasan PNE, nahazoana alalana
“Fa raha mbola eto ny ranomasina, dia misy ny fanantenana…Inona moa no hojonoinay raha hivadika ho simenitra avokoa izao rehetra izao?” hoy i Arthur*, mpanjono iray avy ao Sitio Kinse, fokonolon'ny nosin'i Taliptip misitrisitrika ao anaty alan-konko matevina.
Nilaza i Arthur fa amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 500 Philippine Peso-PHP ($10.00 US Dollars) ny sandan'ny trondro azonay isan'andro. Misy ny ampaham-bola hividianana lasantsy sy fandaniana hafa, ary handoavana ny tapakilam-piantsonan-tsambo. Mandritra ny vanim-potoana maina, misy ireo mpanjono no lasa mankeny amin'ny tanin-tsira ka mahazo 154 ka hatramin'ny 254 PHP [$3-5.00 USD) isaky ny gony araka ny hatsaran'ilay sira.
Efa mahalana anefa sisa amin'izao fotoana izao no ananana andro tsara ahazoana hazandrano betsaka. Nanazava i Gloria*, mponin'i Sitio Dapdap ao Taliptip fa mahazatra ny fianakavian'ny mpanjono ny mitahiry velona ny haza azony amin'ny dobokely namboariny ka mivarotra ireny isan-kerinandro. Lafo loatra ny mandeha mankany amin'ny tsenaben'i Obando isan'andro raha oharina amin'ny haza tsy mitsahatra ny mihamihena.
Mandrahona ity tanàna kely an'ny mpanjono sy mpanao sira ity ny volavolam-panarenana voalaza. Sary avy amin'ny Kalikasan PNE, nahazoana alalana
Ny fahasarotam-piainana no manosika ny vahoakan'i Taliptip hiaina hatrany araka izay tsy maintsy hivelomana. Monina tsy mahazo herinaratra ry zareo ka tsy maintsy manokam-bola hividianana takela-masoandro sy bateria hahazoana jiro tsotra. Mikarakara ny ala honko ny mponina satria miaina ao amin'ny fakany ny karazan'akorandriaka sy sifotra otazan-dry zareo sady sakana voajanahary amin'ny onja mahery.
Ampahan'ny vala fitehirizan-javaboary ala honkon'i Bulakan. Saripika avy amin'i Leon Dulce/Kalikasan PNE, nahazoana alalana
Ankilan'ny tahirin-javaboary mirefy 25 hekitara natsangan'ny Departemantan'ny tontolo iainana sy ny akora voajanahary (DENR), mbola maro ny velaran'alan-konko miely amin'ny ranon'i Taliptip. Maro dia maro ihany koa ny vorona toy ny sanga, samby, vintsirano ary sidisidina manorim-ponenana amin'ireny hazo ireny.
Manana sanda lehibe amin'ny maha-mpitahiry tontolo voajanahary azy ireny fefy maitso manamorona ny ranomasina ireny. Nefa dia nankatoa  ilay tetikasam-panarenana ny Fahefana Fampandrosoana Ara-Toekarena Nasionaly (NEDA), sampan-draharaha voalohany misahana izany na dia mifanohitra amin'ny fomba fijeriny aza izany.
Nanambara ny San Miguel fa afa-mandoa manontolo ny 735,6 miliara PHP (14 miliara dolara US) hanaovana ny ‘aerotropolis,’ sanda avo dia avo sy tosika ara-bola goavana hanohanana ny NEDA, vola ampy hanamarinana ny famindrana olona an'arivony maro rehefa voavadika ny zavamaniry mampiaina ny toerana.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 ihany koa no nosoniavin’ ny governemanta Duterte ny fifanaraham-piarahamiasa amin'ny governemanta holandey amin'ny famolavolana Drafitrasa Fampandrosoana Lovainjafy ao amin'ny Helodranon'i Manila (MBSDMP). Ny sarety indray anefa no alohan'ny omby, amin'ny fisian'ny tetikasa tahaka ny aerotropolis izay mandroso haingana dia haingana tsy misy fitarihan'ny lasitra fitantanana sy fampandrosoana lovainjafy amin'ny ankapobeny.
Efa ho 30.000 hekitara amin'ny tetikasa  amin'izao fotoana izao no mandrakitra ny manamorona ny oala.
Ampahan'ala honko heverina ho notapahin'ny mpiasan'ny San Miguel. Saripika avy amin'i Leon Dulce/Kalikasan PNE, nahazoana alalana
Nisy nilaza fa ny mpiasan'ny San Miguel no tao ambadiky ny fanapatapahana ny ala honko tao Taliptip tamin'ny Mey 2017. Tsy manan-kevitra mihitsy ny fokonolona raha nahazo alalana manokana avy amin'ny DENR, araka ny takian'ny lalàna, hanapaka ny hazo ireo tompon'andraikitra tamin'ny fanapahana ny hazo.
Ho an'i Arthur, tsy azo iadian-kevitra ny fiarovana ny fivelomana tokana fantany amin'ny fandrahonan'ny fanarenana. Nanazava izy, “tsy hilaozanay ny fonenanay. Hiady izahay raha mbola misy ihany koa ny olona manohana anay sy manome tanjaka anay hiady.”
Niditra lalina dia lalina miaraka amin'ireo fokonolona ny vondrona ara-tontolo iainana sy ny fiangonana amin'ny tolona fanavotana an'i Taliptip sy ireo fokonolona hafa manerana ny Oalan'i Manila. Hijoro hiaraka amin'ny vahoaka ve i Duterte ary mbola hifikitra amin'ny fomba fiteniny  hanohitra ny fanarenana, sa mbola hiankohoka amin'ny didin'ny tombontsoan'ny fihariana goavana indray?
Leon Dulce no mpandrindra nasionalin'ny Tambajotran'ny vahoaka Kalikasan ho fiarovana ny Tontolo Iainana. Zohio ao amin'ny Facebook  ny tolona ifotony ataon'ny vahoaka hanavotana an'i Taliptip, na zohio amin'ny alalan'ny tenirohy (farangonteny) #SaveTaliptip ao amin'ny Twitter.
*Nesorina noho ny antony ara-piarovana ny tena anarana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/08/120952/
 fomba fiteniny: http://business.inquirer.net/251981/contentious-reclamation